I-Samsung Galaxy M40 iqinisekisiwe yi-Wi-Fi Alliance | I-Androidsis
Isamsung ilungiselela i-Galaxy M40: amabanga aphakathi afumene isatifikethi seWi-Fi Alliance
Okwangoku, usapho lwezixhobo Galaxy M Isamsung ine-trio ye-middle-range mobiles (Galaxy M10, M20 y M30), ezibetha imakethi yaseIndiya ngokwamkelwa okuhle kwabathengi.
Ukuze wenze i-quartet, esinye isiphelo sendlela siya kongezwa kule seti, engasayi kuba yimbi ngaphandle kwe I-Galaxy M40, imodeli enevithamini ngakumbi apho iWi-Fi Alliance ityhile khona ezinye iinkcukacha, njengoko iarhente iyiqinisekisileyo.
Isamsung yandisa usapho lwayo olutsha kunye neGalaxy M40
I-Samsung Galaxy M40 iqinisekiswe yi-Wi-Fi Alliance
Ukugcina iliza lamva nje lesibhengezo seSamsung kube ngumceli mngeni, ukutsho nje okuncinci. Emva kokubhengeza ngokusesikweni into ekudala ilindelwe Galaxy A80 kunye Galaxy A20e kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngoku kubonakala ngathi I-Galaxy M40 iya kufika ibe phezulu kumgca wayo.
Olu xwebhu luchaza kumzimba oqinisekisayo i «SM-M405F / DS» ifowuni, elandela ngokucacileyo indibano yenani losapho lakwaGlass M. Ngelishwa, iphepha alibonisi lwazi malunga nesixhobo, ngaphandle kwenyani lonto baleka I-Android 9.0 Pie kwaye ine-Wi-Fi a / c (2.4 GHz / 5 GHz). Okwangoku, sinokwenza uqikelelo kumxholo wee-specs.
Ukujonga kwi-M10, M20 kunye neM30, kubonakala ngathi kunokwenzeka ukuba i-M40 ibonelele ngolunye ukonyuka kwidayalonal bonisa ngaphaya kweesentimitha ezi-6.4 ze-M30. Kananjalo, ngokubona indlela eyahluke ngayo eyokugqibela kwiphaneli ye-Super AMOLED, silindele ukuba kungabikho nto incinci kwisixhobo.
Njengoko ufunda ezinye iingcebiso kwiGlass A kunye neM lineups, I-M40 inokuboleka i-chipset efanayo ye-Exynos 7904 kwi-M30. Ukuba kuyenzeka ukuba ibe njalo, oku ngekhe kusothuse konke konke.
IGlass S10 entsha kunye neGPS M bafumana isatifikethi se-HDR kunye ne-HD, ngokwahlukeneyo, ukusuka kwiNetflix
Inye into esinokuqiniseka ngayo yile IGalaxy M40 iyeza kungekudalanjengoko inkqubo yesatifikethi seWi-Fi iyakwenziwa kade kuphuhliso kunye nomjikelo wokukhutshwa kwesixhobo. Owu, kwaye ukuba uthe waqaphela "i-DS" ivela ekupheleni kwenombolo yemodeli kwaye uyazibuza ukuba ithetha ntoni, imele "iDual SIM."
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung ilungiselela i-Galaxy M40: amabanga aphakathi afumene isatifikethi seWi-Fi Alliance
I-Huawei FreeLace, sihlalutya ii-headphone zeHuawei zamva nje
Uyibona njani imeko yabafowunelwa bakho be-WhatsApp ngaphandle kokwazi